TIMES टाइम्स ऐश्वर्या राईले पूर्ण रूपमा रेड लिपस्टिक बन्द गर्‍यो! - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
Times टाइम्स ऐश्वर्या राईले पूर्ण रूपमा रेड लिपस्टिक बन्द गर्‍यो!
घर सुन्दरता सुझावहरू बनाउनुहोस् सुझावहरू बनाउँनुहोस् oi- अर्डर द्वारा आदेश शर्मा | प्रकाशित: बिहीबार, जनवरी २२, २०१ 2015, १:15:१:15 [IST]
ऐश्वर्या राई बच्चन को ब्रान्ड एम्बेसेडर भएको छ ल ओरियल धेरै वर्ष को लागि पेरिस। उनले कस्मेटिक ब्रान्डका बिभिन्न सौन्दर्य उत्पादनहरूका लागि अभियान चलाइन्। यद्यपि, ऐशले रातो लिपस्टिकको लागि फेटिस विकास गरेको देखिन्छ।
ढिलाइ भएपछि, मिस मिस वर्ल्डले लाउरियल कोर्सबाट रेड लिपस्टिकको विभिन्न शेडहरू लगाएर उत्साहजनक प्रदर्शनहरू गरिरहेकी छ!
लोरेल ब्रान्ड एम्बेसडरहरूको रातो लिपस्टिकको विभिन्न नयाँ शेडहरू परिचय गराउँदै नयाँ विज्ञापन हेरेपछि, यो स्पष्ट छ कि एशले उनीहरूसँग विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गरिरहनुपर्‍यो।
कसरी हातबाट हेन्ना हटाउने
'स्टार शुद्ध रेड्स लिपस्टिकस' नामको हस्ताक्षर संग्रहमा सात म्याट शेडहरू समावेश छन् जसलाई ऐश्वर्या राई लगायत सात लोरेल पेरिस राजदूतहरूले छनौट गरेका थिए। सोनम कपूर , फ्रिडा पिंटो , जुलियान मूर र ब्लेक जीवन्त।
एशले पनि रातो लिपस्टिकको लागि उनको उत्पादन व्यक्त गरेको केही समय अघि उत्पादनको प्रक्षेपणमा व्यक्त गर्‍यो। 'व्यक्तिगत रूपमा मेरो लागि, रातो ओठले शक्ति र ईलान निकाल्दछ। ल ओरियल पेरिसलाई बधाई छ रातो लिपस्टिकको दायरा प्रस्तुत गर्नका लागि जुन एकै पटक अर्बान, उत्तम र आत्मविश्वास विकिरण हुन्छ किनकि यसले हरेक छालाको टाउको चाप्छ र ओठमा एक सुन्दर आयाम थपेको छ।
प्रत्येक महिलाले उसको समग्र लुकमा ग्लैमर र फ्लेयरको टचको लागि उसको पूर्ण रातो लिपस्टिक फेला पार्नुपर्दछ। म यो भन्छु - किनकि तपाईं यसको लायक हुनुहुन्छ! ' उनले थपे हामी पूर्ण रूपमा सहमत हुन्छौं जब रातो लिपस्टिक फरक पर्दछ जब यो छालाको टोन र रंगमा आउँदछ।
यद्यपि ऐश्वर्या राई बच्चन सौन्दर्यको प्रतीक हुन् जसले विगत एक बर्षदेखि रातो र ofका विभिन्न रंगहरू बोकेका छन्। एक दिन अघि हामीले ऐश्वर्या राई बच्चनलाई अडियो लन्चमा रातोको हल्का छाया तान्यौं।
यहाँ उत्तम समयहरू छन् जब ऐश्वर्या राई बच्चनले विभिन्न अवसरहरूमा लालित्यका साथ रातो लिपस्टिकको शेडहरू तान्छन्।
कान २०१ 2014 मा रेड कार्पेट
ऐशले उनको चमकदार स्ट्र्यापलेस गोल्डन गाउनलाई हल्का श्रृंगार र रगत रातो चमकदार रातो लिपस्टिकको साथ मिश्रित गर्‍यो, निश्चित रूपमा लोयलबाट।
पहिलो विवाह वार्षिकोत्सव मित्र को लागी शुभकामना दिन्छ
आर्ट गाला २०१ 2014 मा
उनको क्यान्स २०१ trip यात्रामा साँझ हेर्नको लागि, राखले उनको आँखाको साथ पनि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो। एक चम्किलो नग्न रंगको फ्लोर स्वीपिंग गाउन लगाउँदै, ऐश एकदम राम्रो देखिन्थ्यो।
उनको श्रृंगारमा नजिकबाट हेर्नुहोस्। उनले मयूर हरियो आईशैडो (सायद पेन्सिल) र मैट गाढा रातो लिपस्टिक लागू गर्छिन्। केवल ऐश्वर्या जस्तो सुन्दरताले एक पटकमा रंगहरूको मिश्रण लिन सक्छ!
ल ओरेल रेड लिपस्टिक लन्चमा
राखले भर्खरको उत्पादनको प्रक्षेपणमा रातो लिपस्टिकको लागि उनको प्रेम देखाई। 'व्यक्तिगत रूपमा मेरो लागि, रातो ओठले शक्ति र ईलान निकाल्दछ। 'ओरियल पेरिसलाई बधाई छ धेरै रातो लिपस्टिकहरू जो एकैचोटि अर्बिन, उत्तम र आत्मविश्वास विकिरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ किनकि यसले प्रत्येक छालाको टाउको चापल पार्छ र ओठमा सुन्दर आयाम थपेको छ,' उनले भनिन्।
कसरी स्थायी रूपमा प्राकृतिक रूप बाट कपाल लाई
सरल तर स्टाइलिश
राखे पखेटाको आँखा मेकअप र चम्किलो सुन्तला-रातो लिपस्टिकको साथ ठाडो देखिन्छ।
ल ओरेल विज्ञापन
ल ओरेलको नयाँ रातो लिपस्टिक विज्ञापन अभियानको फोटोशूटको लागि, एश सादा सेतो सूट र गाढा रातो ओठमा चौंकिलो देखिन्।
जातीय पहिरनको साथ साथै क्यारीहरू पनि!
ऐशले हालै उनको मनपर्ने, अनारकली सूट लगाएर अडियो सुरुवातमा रातो लिपस्टिकको छाया ओगटेकी थिइन्।
क्यान्स फिल्म फेस्टिवल २०१० मा, एशले स्ट्र्यापलेस कालो गाउनको साथ चमकदार रातो लिपस्टिक तान्यो। कर्ल गरिएको नेत्रगोल, चाँदीको आँखा श्रृंगार र गुलाबी गालहरूले यस रेड कार्पेट लुकलाई अन्तिम टच दिए।
तरल लिपस्टिक अनुप्रयोगको साथ संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? तपाइँ तरल लिपस्टिक कसरी लागू गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ छ
चाखलाग्दो गोल थिमहरू यो नवरात्रि
भारतीय छाला को लागी १ Fair फेयर फेस प्याक
होली विशेष: भhangको Health स्वास्थ्य लाभ
चेस्ट एक्नेबाट छुटकारा पाउनको लागि १ Home घरेलु उपचार
अचारी गोष्ट: मसलादार मटन रेसिपी
भगवान शिवको बारेमा १० थोरै ज्ञात तथ्यहरू
सबैलाई मन परेको व्यक्ति कसरी बन्न सकिन्छ
१as बर्ष देवदास: १२ शीर्ष लेहेंगा र साद्री मदुरी दीक्षित र ऐश्वर्या राई पुन: भेट
तपाइँको अवधिको शुरुवात रोक्न यहाँ प्राकृतिक तरिकाहरू छन्
वजन घटाउनका लागि १० उत्तम फलहरू
फल र तरकारीहरूमा एसिडहरू उपस्थित छन्
प्राकृतिक रूपमा छाती कसरी सानो बनाउने
बच्चाहरूको लागि फेन्सी ड्रेस विचार सूची
तोरीको लागि रायोको तेल र नरिवल तेल
घरमा कसरी हिप्स र फिलाहरू कम गर्ने
स्कूलमा विदाई पार्टीको लागि ड्रेस कोड